နက်မှောင်သန်စွမ်းတဲ့ ဆံကေသာအတွက် လျှို့ဝှက်ချက်က ... - Shop Life: A Blog To Complete Your Lifestyle
နက်မှောင်သန်စွမ်းတဲ့ ဆံကေသာအတွက် လျှို့ဝှက်ချက်က …0406
Usman Ghani February 10, 2020 5:16 am February 10, 2020
နက်မှောင်သန်စွမ်းပြီး လှပတဲ့ ဆံကေသာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မို့အတွက် ဘယ်လိုတွေထိန်းသိမ်းကြမလဲ …
ဒီနေ့မှာတော့ ဆံကေသာ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်လေး တစ်ခုကို ပြောပြပေးမယ်နော် …. အဲ့တာလေးကတော့ Shop မှာ Official စတိုးတစ်ခုအနေနဲ့ ရောင်းချနေတဲ့ Kerasys အမှတ်တံဆိပ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ….
Kerasys Brand ထဲမှာမှ ဆံကေသာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ပစ္စည်းလေးကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ဆံကေသာကို ဘယ်လိုနက်မှောင်သန်စွမ်းစေလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် … 🤩
မကြာခဏ ဆံပင်ကောက်ခြင်း ဖြောင့်ခြင်းဆေးဆိုးခြင်းများကြောင့် အဖျားနှစ်ခွဖြစ်ခြင်း ၊ပြတ်တောက်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းပြီး ပျက်ဆီးနေသော ဆံသားများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားပါတယ် … နေကြာစေ့အဆီအနှစ်များက နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို 58% နှင့် အထက် ကာကွယ်ပေးခြင်း တို့ကြောင့် သာမန် Shampoo နှင့် Rinse များထက်3ဆ ပိုမိုနူးညံ့စေပါတယ် ….
ခေါင်းလျော်ပြီးလျှင် conditioner ဖြင့် မိနစ်အနည်းငယ်ခန့်ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပြီး ရေဖြင့် စင်ကြယ်စွာ ဆေးချပါ …
Keramide Hair Serum (Damage Care)
ဆံသားမကြာခဏ ပြုပြင်ခြင်း ၊ ကောက်ဆေး ဖြောင့်ဆေး၊ ဆိုးဆေးများ နှင့် လေအပူပေးစက်အသုံးပြုမှုများကြောင့် ဆံသားခြောက်သွေ့ပျက်ဆီးနေသူများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါတယ် … လှပသေသပ်သည့် ဗူးဒီဇိုင်းနှင့် အတူ စွဲမက်ဖွယ်မွှေးရနံ့ အချိန်တိုအတွင်း သိသာသည့်အာနိသင်ကို အပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ် …
Kerasys Salon Care Voluming Treatment 200ml
ဆံလုံးသေးပြီး အားနည်းသော ဆံသားနှင့်ကောက်သားများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ကျစ်လစ်ချောမွေ့မှုရှိစေရန် အဓိကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ် …ဆံသားများကို အားအင် ပြည့်စွမ်းစေပြီး သေးသွယ်ပါးလျသော ဆံသားများကို ထူထဲသန်စွမ်းစေပါတယ် ….
ခေါင်းလျော်ပြီးနောက် ရေစိုနေသော ဆံသားပေါ်သို့ Treatment ကို သင့်တင့်တဲ့ ပမာဏကို ထည့်ပြီး နှံ့စပ်စွာ ပွတ်လိမ်းနှိပ်နယ်ပေးပါ …. တစ်မိနစ်ခန့် နှိပ်နယ်ပေးပြီးနောက် ရေများများဖြင့် စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောပေးပါ …
ကိုရီးယား တိုင်းရင်းဆေးနည်းပညာမှ အဖိုးတန် သဘာ၀ ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ဖယောင်းအဆီအနှစ်၊ ဖယောင်းပန်းအရွက်၊ ဂျင်ဆင်း၊ သစ်ခွ၊ သလဲသီး၊ အဆီအနှစ်၊ နွယ်ချိုနဲ့ Korea Angelica Root တို့ပေါင်းစပ် ပါဝင်နေသည့် Orential Hair Clinic System က ဆံသားကို ကျန်းမာလှပသန်စွမ်းစေပါတယ် ..
ဆံသားကို နဂိုထက် 1.6 ဆ ပိုမိုနူးညံ့လာစေပြီး ဆံသားပြတ်တောက်မှု 79% အထိလျှော့ချပေးခြင်းတို့ကြောင့် သာမန် Shampoo များထက် ဆံပင် ကျိုးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးပါတယ် ….
Kerasys Kerasys Hair Fall Control Rinse 400ml
အဆင့်မြင့် အာဟာရဓာတ်ဖြည့်တင်းခြင်းနှင့်အတူ ဆံသားကျွတ်ထွက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးမည့်အနောက်တိုင်း နှင့် အရှေ့တိုင်းရင်းဆေး နည်းပညာနှစ်ရပ်ကို ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် …
ဆံသားကျွတ်ထွက်ခြင်းကို 30% အထိလျှော့ချပေးပျီး ဆံသား ပြတ်တောက်ခြင်းကို 55% အထိလျှော့ချပေးပါတယ် …
Kerasys Perfumed Pure & Charming Conditioner 600ml
သဘာ၀ သင်းပျံ့သောရနံ့ နှင့် မွှေးကြိုင်သော ပန်းရနံ့များကို တစ်နေ့တာလုံး လန်းဆန်းစေခြင်း၊ လီလီပန်းနှင့် တီတာရယ်ပန်း အဆီအနှစ်များပါဝင်သောကြောင့် ခြောက်သွေ့ ပွယောင်းနေသော ဆံသားများကို စိုပြေနူးညံ့စေပါတယ်… မွှေးပျံ့သင်းရနံ့မှုကို ခံစားရစေမည့် Kerasys ၏ မွှေးရနံ့အသစ် Kerasys Perfumed Pure & Charming Conditioner ကိုသုံးပြီးနောက် အချိန်အတော်ကြာမြင့်သည့်အထိ ရေမွှေးဆွတ်ထားသကဲ့သို့ သင်းပျံ့သည့် မွှေးရနံ့ကို ခံစားစေပါတယ် ….
ခေါင်းလျော်ပြီးလျှင် conditioner ဖြင့် မိနစ်အနည်းငယ်ခန့်ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပြီး ရေဖြင့် စင်ကြယ်စွာ ဆေးချပါ။
ဆံသားများကို ပိုးသားကဲ့သို့ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသွားစေရန် အဓိက ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးပြီး Moringa မှ ရရှိသည့် သဘာ၀ Protein, Keratin နှင့် Velvet ပန်းမှရရှိသော Acid Ingredient များ ပါဝင်ခြင်း၊3Step Hair Recovery System ကို အသုံးပြု ထားခြင်း၊ မညီမညာ မလှမပ ဖြစ်နေသော ဆံသားများကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းညီညာ ဖြောင့်စင်းသွားစေခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် …
ခေါင်းလျော်ပြီးနောက် ရေစိုနေသော ဆံသားပေါ်သို့ Treatment ကို သင့်တင့် ပမာဏ ထည့်ပြီး နှံ့စပ်စွာ ပွတ်လိမ်းနှိပ်နယ်ပါ…. တစ်မိနစ်ခန့် နှိပ်နယ်ပေးပြီးနောက် ရေများများဖြင့် စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောပါ….
Kerasys Product များကို ဒီလင့်ခ်တွင် > > > http://bit.ly/38kpn7S < < < ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် …
သင့်ဖုန်းထဲမှာ Shop App ရှိရုံနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အလွယ်တကူဈေးဝယ်နိုင်လို့ ခုပဲ Download လုပ်လိုက်ရအောင် ….
Shop app ကို သုံးပြီး ဈေးဝယ်မယ်ဆိုရင် – ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း(၁၄)ခုနေရာအနှံ့ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ပစ္စည်းအိမ်ရောက်မှ ငွေပေးချေလို့ရတဲ့ စနစ် (Cash On Delivery) လည်းရှိပါတယ်။
Previous Article၅၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ Mask လေးတွေသုံးပြီး Glow Skin လေးကို ပိုင်ဆိုင်ကြမယ် ….Next Article🖥 ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အလွယ်တကူသုံးလို့ရမယ့် ခေါက်စားပွဲများ 🖥